fampanarahan-dalana ny olom-pirenena. Taxi-brousse miisa 05 sy fiara madinika miisa 03 indray no tra-tehaky ny polisy tetsy amin'ny fasan'ny Karana sy Iavoloha ny alarobia sy omaly alakamisy raha saika hiondrana an-tsokosoko hivoaka ny renivohitra. Tsy nahitana taratasy fahazoan-dalana hiala ny faritr’ Analamanga moa ireto fiara ireo ka voatery nogiazana sy nandraisana fepetra avokoa. Olona miisa 14 no voasaringotra tamin'izany ka mpamily sy ny mpanampy azy miampy ireo mpanera no nentina teny amin'ny paositry ny polisy nanaovana fanadihadiana. Mpamily iray sy ny mpanampy azy kosa no mbola saika hanao kolikoly amin'ireo polisy nanakana azy ka nanaovana famotorana manokana mihitsy . Hentitra moa ny Ministry ny filaminam-bahoaka manolona ny trangana kolikoly tahaka izao satria tafiditra indrindra ao amin'ny vina napetrany raha iny izy handray ny Minisitera iny ny fiadiana amin'ny kolikoly izay anisan'ny manaratsy ny asan'ny polisim-pirenena.